Mitsitsia 30% amin'ny famandrihana Fluid Mobile Prototyping
Tsiranoka: Mamolavola, mizaha toetra ary zarao ireo prototypes findainao
Zoma, Jona 27, 2014 Alakamisy, Jona 26, 2014 Douglas Karr
Tsy azoko antoka fa efa nandramana motera prototyping mora kokoa noho i Fluid aho. Matotra tokoa ianao omeo mpamaky fitsapana ny mpampanonta azy ireo, tsotra dia tsotra, tsy manam-paharoa ary manana paleta mahery hisintona sy hampihena ireo singa mpikirakira mpampiasa izay mipoitra tampoka amin'ny takelaka sy ny habeny.
Fluid dia manana fampiharana mpilalao mahazatra ho an'ny Android, iPhone ary iPad. Izy ireo dia mamela anao hanangana prototypes multi-efijery mifandraika, manondrana ny tsindry, manampy fihetsika sy fiovana amin'ny swipe, paompy, paompy indroa, solafaka, fade ary fiakarana. Ankoatr'ireo widget Android efa vonona, Android, Windows 2,000 ary wireframe UI maherin'ny 8 - azonao atao koa ny mampakatra ny sarinao.
Martech Zone afaka mahazo ny mpamaky 30% amin'ny famandrihana 6 volana ho an'ny UI Fluid Drafitra matihanina miaraka amin'ny rohy mpiara-miasa aminay!
Miankina amin'izay drafitra nofidinao, azonao atao ny manana tetik'asa mavitrika marobe, forum sy / na fanohanana mailaka, tetikasa mavitrika ary efijery fandefasana azy manokana. Ny drafitra rehetra dia miaraka amina tetik'asa tsy miasa tsy voafetra, pejy tsy voafetra isaky ny tetikasa, tantaran'ny kinova, ny fahaizana mitsapa amin'ny fitaovana iray, ary mizara fiaraha-miasa amin'ny ekipa. Manolotra ihany koa ny fluid sehatry ny orinasa misy amin'ny masoivoho sy orinasa.
Tags: Androidpaompy indroaprototyping droidmihavasokaAtsimbadihotsiranokaranoka uiiOSprototyping iosprototyping ipadprototyping iphoneprototyping findayprototypingtonian-dahatsoratra prototypingtsaryswipepaompyui prototypingvaravarankely 8wireframe
2014: Taona niainan'ny mpanjifa